Baiboly pejy 666 - Ny Baiboly
Voalohany < 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 Manaraka Farany
1 Korintiana toko 16 (tohiny)
20Manao veloma anareo ny rahalahy rehetra. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina.
21Izaho Paoly, manao veloma anareo, amin'ny sora-tànako.
22Raha misy tsy an'i Jesoa-Kristy Tompontsika, dia aoka ho voaozona izy! Maran-Atha (Tamy ny Tompontsika). 23Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompo. 24Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Amena.
2 Korintiana toko 1
Fiarahabana - Fanalana alahelo azon'i Paoly tao anatin'ny fahoriana maro - Tsy namitaka izy, na nanao kitoatoa, fa voampanga tsy marina.
1Paoly Apostolin'i Jesoa-Kristy, noho ny sitra-pon'Andriamanitra, sy Timote rahalahy, mamangy ny Eglizin'Andriamanitra izay any Korinto, mbamin'ny olona masina rehetra eran'i Akaia manontolo: 2ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa-Kristy Tompo.
3Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesoa-Kristy Tompontsika, sy Rain'ny famindram-po, ary Andriamanitry ny fanalana alahelo rehetra, 4izay manafaka alahelo anay amin'ny fahorianay rehetra, mba hahazoanay manafaka alahelo ny tra-pahoriana rehetra, amin'ny fanalana alahelo noraisinay taminy. 5Fa araka ny haben'ny fijalian'ny Kristy mihatra aminay no haben'ny fanalana alahelo azonay amin'ny alalan'ny Kristy koa. 6Raha azom-pahoriana izahay, dia ho fanalana alahelo sy famonjena anareo izany; ary raha alana alahelo izahay, dia ho fanalana alahelo anareo koa izany, fa mahatonga anareo handefitra tsara ireny fahoriana entinay ireny ihany. 7Ary mafy ny fanantenanay ny aminareo, satria fantatray fa toraka ny niombonanareo tamin'ny fahoriana no hiombonanareo amin'ny fanalana alahelo koa.
8Tsy tianay tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, ny amin'ny fahoriana nanjò anay tany Asia, fa novesarana tsy eran'ny aina sy tafahoatra ny zakanay izahay, ka efa tsy nanampo izay ho velona intsony; 9fa toa efa renay ao amin'ny tenanay ny didim-pahafatesana mba tsy hitokianay amin'ny tenanay intsony, fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty. 10Izy no nanafaka anay tamin'izao fahafatesana efa hamely izao, sy manafaka anay ankehitriny, ary mbola antenainay hanafaka any aoriana koa, 11indrindra fa raha manampy anay amin'ny fivavahana koa hianareo; dia ho maro ny mpisaotra noho ny fahasoavana azonay, satria maro no nangataka nahazoanay azy.
12Fa izao no voninahitray: ny konsiansinay no vavolombelona fa tamim-pahatsoram-po sy tamin-kitsim-po teo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy tamin'ny fahendren'ny nofo, fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, no nitondranay tena tamin'izao tontolo izao, fa indrindra taminareo. 13Izay vakinareo sy fantatrareo tsara ihany no soratanay aminareo; ary manantena aho fa ho fantatrareo hatramin'ny farany 14(sady maro aza no efa mahalala anay tsara; fa izahay moa voninahitrareo, hianareo koa ho voninahitray toy izany, amin'ny andron'i Jesoa-Kristy Tompontsika.
15Noho izany fahatokiana izany, tao aloha dia nikasa hankaty aminareo aho mba hahazoanareo soa indroa: 16hihazo any aminareo aho aloha rahefa mankany Masedonia, ary ho any aminareo indray rahefa miverina avy any, dia hianareo no hanatitra ahy any Jodea. 17Ka moa niovaova hevitra foana va aho raha nanao izany hevitra izany? Sa araka ny nofo no anaovako fikasana, ka dia misy "eny" sy "tsia" ato amiko? 18Araka ny maha-marina fa mahatoky Andriamanitra no tsy maha-"eny" sy "tsia" ny teninay taminareo. 19Satria ny Zanak'Andriamanitra dia Kristy Jesoa, izay notorinay sy Silvano ary Timote taminareo, tsy nisy "eny" sy "tsia", fa "eny" ihany no tao aminy. 20Fa na firy na firy fampanantenana avy amin'Andriamanitra, dia tao amin'i Jesoa ihany ny "eny", ka dia amin'ny alalany sy amin'ny asanay koa no anaovana "Amena", mba ho voninahitr'Andriamanitra. 21Ary tsy iza no mampaharitra anay mbaminareo ao amin'ny Kristy, fa Andriamanitra, izay naha-voahosotra antsika, 22sy nanisy tombo-kase antsika koa, ary nanome ny Fanahy ho antoka ao am-pontsika. 23Ary mianiana amin'ny fanahiko aho, sy miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona fa fitsitsiako anareo no mbola tsy nankanesako aty Korinto indray; 24tsy dia hoe hanao jàdona amin'ny finoanareo izahay (sanatria), fa miara-miasa hampandroso ny hafalianareo; raha ny finoana, dia efa miorina tsara hianareo.
2 Korintiana toko 2
Ny antony tsy nankanesany tany Korinto - Ny amin'ny hamelana an'ilay nanao ratsy (I Kor. v) - Ny dia nalehany, sy ny vokatry ny fisasarany.
1Ny tsy hiverina indray any aminareo amin'alahelo àry no hevitra tapaka tao am-poko; 2satria raha mampalahelo anareo aho, iza indray àry no hampifaly ahy, afa-tsy izay nampalaheloviko ihany? 3Hany antony nanoratako toy izany taminareo, dia ny mba tsy hahazoako alahelo amin'ireo tokony hifaliako, rahefa tonga aho, satria matoky anareo rehetra aho fa raisinareo ho fifalianareo rehetra koa ny fifaliako. 4Eny, tamim-pahoriana lehibe, sy tamin'alahelo nahahontsa ny foko, ary tamin-dranomaso be no nanoratako taminareo, tsy ny mba hampalahelo anareo anefa, fa ny mba hahafantaranareo ny haben'ny fitiavako anareo.
5Raha nisy nahatonga alahelo, dia tsy izaho no nampalaheloviny, fa hianareo rehetra no mba nisy nampalahelovany anareo ihany (tsy te-hamely azy mafy loatra aho). 6Ampy ho an'izany olona izany ny famaizana efa nataon'ny maro aminareo, 7ka dia ny mamela sy mampifaly azy aza no tokony hataonareo izao, fandrao dia reraky ny alahelo tafahoatra indray izy. 8Koa mihanta aminareo aho mba ho amim-pitiavana lehibe no handraisanareo azy. 9Izaho no manoratra aminareo koa anie, dia ny mba hitsapako anareo, na hanaiky ahy amin'ny zavatra rehetra hianareo na tsia e. 10Izay avelanareo heloka dia avelako koa; fa raha ny amiko, izay heloka navelako, raha mba nisy navelako, dia noho ny aminareo, sy teo imason'ny Kristy no namelako azy, 11mba tsy ho voan'ny teti-dratsin'i Satana isika, fa fantatsika ny hafetseny.
12Nony tonga tany Troasy hitory ny Evanjelin'ny Kristy aho, na dia novohana varavarana tao amin'ny Tompo aza, 13dia tsy nandry ny fanahiko, satria tsy hitako tao Tito rahalahiko; ka nanao veloma ny olona aho, dia lasa nankany Masedonia.
14Fa isaorana anie Andriamanitra izay manome anay voninahi-pandresena mandrakariva ao amin'ny Kristy Jesoa, sy mitondra anay hanely ny hanitry ny fahalalana azy hatraiza hatraiza. 15Fa hanitry ny Kristy ho an'Andriamanitra izahay, na amin'izay voavonjy, na amin'izay very: amin'ny sasany moa, fofom-pahafatesana hahafaty; fa amin'ny sasany kosa, fofom-piainana hahavelona. 16Zovy àry no tandrifiny hahavita asa toy izany? 17Fa tsy mba toy ny sasany izay mampifaho ny tenin'Andriamanitra izahay, fa tsy misy famahony sy araka ny nanomezan'Andriamanitra azy no itorianay azy eo anatrehan'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy.
2 Korintiana toko 3
Andriamanitra ihany no iankinany - Ambony ny mpandraharaha amin'ny Lalàm-baovao.
1Moa midera tena indray va izahay? Sa mila taratasy tahaka ny sasany filazan-tsoa anay na ho any aminareo, na avy any aminareo? 2Hianareo no taratasinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakin'ny olon-drehetra. 3Eny, miseho miharihary fa hianareo no taratasin'ny Kristy, nampanoratiny anay, tsy tamin'ny ranomainty, fa tamin'ny Fanahin'Andriamanitra velona; ary tsy tamin'ny takela-bato fisaka, fa tamin'ny takela-nofo kosa, dia ny fonareo izany.
4Ary Andriamanitra ihany no anananay izao fahasahianay izao, amin'ny alalan'ny Kristy.
Pejy: Voalohany < 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3415 seconds